ANTENIMIERAM-PIRENENA TSIMBAZAZA : Hovelabelarina anio ny politika ankapoben’ny Fanjakana
Isan’ireo lahadinika telo lehibe handalo eny anivon’ny Antenimieram-pirenena Tsimbazaza ny famelabelarana amin’ireo solombavambahoaka ny politika ankapoben’ny fanjakana na ny Pge (Politique generale de l’Etat). 16 août 2019
Ny talata lasa teo no nivory ireo filoham-baomiera eo anivon’ity andrim-panjakana ity namaritra ny fandaharam-potoana mandritra ity fivoriana tsy ara-potoana ao anatin’ny 12 andro ity. Ny harivan’io kosa no fantatra fa niroso tamin’ny fandaniana izany ireo solombavambahoaka. Araka ny fampitam-baovao voaray avy amin’ny seraseran’ny Antenimieram-pirenena, raha toa ka tsy misy ny fioavana dia anio amin’ny 10 ora maraina no ho avy eny Tsimbazaza hamelabelatra ny politika ankapoben’ny fanjakana ny Praiminisitra, Ntsay Christian.
Ny politikan’ny fanjakana ankehitriny izay mifotra amin’ny Iem misy ireo velirano 13 nifanaovan’ny Filoha Andry Rajoelina tamin’ny vahoaka Malagasy. Anjara andraikitry ny solombavambahoaka no manara-maso akaiky ny fanatanterahana an’io Pge io. Raha toa ka misy ny tsy tanteraka na misy ireo tsy miantraika amin’ny fiainam-bahoaka akory dia hananan’izy ireo feno ny fahefana mitsikera. Nandritra ny lanonam-panokafana an’ity fivoriana tsy ara-potoana ity ny alatsinainy teo dia notakian’ny filohan’ny Aantenimieram-pirenena, Razanamahasoa Christine ny hanazavana amin’ny antsipiriany an’ireo tetikasan’ny fanjakana. Napetrany mazava fa ilain’ny solombavambahoaka ny mahalala izany mba ahafahana manara-maso ny asan’ny governemanta.
“Ny fangatahanay solombambahoaka dia tsara raha somary miditra lalindalina na amin’ny antsipiriany ny amin’ireo tetikasa izay hatao. Izany dia mba hahafahanay solombavambahoaka mandrefy mazava tsara ny zava-bitan’ny governemanta rehefa tonga ny fotoana” , hoy izy. Ankilany ny Praiminisitra avy hatrany dia naneho ny fahavononany ny hanatanteraka an’io fangatahana io ary notsipihany fa zon’ny vahoaka Malagasy ihany koa ny hahalala izany. Heverina fa ny herinandro ho avy io no handinihana ireo lahadinika roa hafa dia ilay lalàna mifehy ny mpanohitra ary ny sata anatiny mifehy ny Antenimieram-pirenena.
Raha ny fandaharam-potoana mandritra ity fivoriana tsy ara-potoana ity eo anivon’ny Antenimierandoholona kosa indray dia tapaka fa ny talata 10 aogositra izao amin’ny 10 maraina no hamelabelatra io politika ankapoben’ny fanjakana eny amin’ny lapa maitso Anosy ny Praiminisitra. Ny 21 aogositra kosa dia hisy fakan-kevitra hiarahana amin’ireo antoko mpanohitra sy fiaraha-monim-pirenena mahakasika ilay lalàna mifehy ny mpanohitra. Ny 23 aogositra amin’ny 2 ora tolak’andro no handinika sy handany io sata hifehezana ny mpanohitra io ireo loholon’I Madagasikara etsy Anosy.